I-Srixon Z 355 IiKlabhu zeGolf: Umqhubi, amaTyhu kunye neeRons
I-'Temployment Mass 'Technology
I-Srixon Z 355 intsapho yeglafu. Dunlop Sports Co. Ltd.
Agasti 18, 2015 - Iintsapho ze-golf ze-Srixon Z 355 ziquka umqhubi, i-fairway woods, i-hybrids kunye neetoni. Kwaye siya kubona ngaphezulu kweyodwa kwiiklabhu kula maphepha alandelayo. Kodwa kuqala igama ngeliphi i-Srixon libiza ngokuba yi-"Mass Mass" teknoloji, eyiyo ikhadi lokubiza lomgca weZ 355.
Abakhiqizi abaninzi begalufu baye bathetha ukudala isivinini se-swing kwi-golfer ngokusebenzisa zonke izisindo zokukhanya, eziqhelekileyo zithetha iindlela zokunciphisa ubunzima be- clubhead .
Nge-Mass Mass, uSrixon ubuyele ubukhulu kwi-clubhead. Ewe, i-clubhead eyona mibi (nangona ikhanya kakhulu ngemigangatho yeminyaka edlulileyo). Umqhubi weZ 355 unesihloko se-211-gram.
Elinye inxalenye yeMisa yeMisebenzi yinqanaba eliphezulu le-balance kwi-shaft. (Intloko ephakamileyo, i-balance point shaft - isandi esiqhelekileyo? Yindlela esetyenziswe kwezinye i-putters ibuyela emva kweminyaka elishumi.)
Ukudibanisa, uSrixon uthi, ubunzima obuphezulu emva kwebhola kumthelela: iteknoloji yokuphucula umdlalo ejoliswe ngakumbi kubagaluli abazama ukuphinda baphendule. I-clubhead eyona mkhulu kunye nepotra ephezulu, i-Srixon ithi, inceda i-golfer iqhuma ngokuphindaphindiweyo ngokuphindaphindiweyo, ngokuphindaphindiweyo.
Kula maphepha alandelayo siza kubona ezinye iifoto zenye zeeklabhu zeZ 355, kunye nama-specs, ixabiso lentengo kunye nolwazi lokufumana ulwazi. Vula ikhasi.
I-Srixon Z 355 Umqhubi
Umqhubi we-Srixon Z 355. Dunlop Sports Co. Ltd.
Umqhubi we-Z 355 ohamba emgama, njengoko kuphawuliwe kwiphepha elidlulileyo, i-211-gram clubhead idibene ne-shaft high point shaft. I-shaft yesitokisi kule meko yiMizakizaki Jinsoku, kwaye loo ndlela ijoliswe kuyo ijonge ibhola ngesivinini esithile kunye nokungahambisani nokuhamba.
I-450cc clubhead iyahlengahlengiswa kwizicwangciso ezili-12 ezihlukeneyo ze- loft , i- angle angle kunye ne- angle angle , kwaye iquka ubuso be-6-4 yesiTyiti.
Umqhubi we-Srixon Z 355 ufika kwizakhiwo eziphambili ze-9.5, 10.5 kunye nama-12 degrees amadoda, i-12 ne-15 degrees kubafazi. I- MAP yi-$ 349.99, kwaye abaqhubi bafikelela kwindawo yokuthengisa nge-Sept. 18, 2015.
I-Srixon Z 355 I-Fairway Woods kunye namaHbridi
I-fairway wood (phakathi) kunye ne-hybrid (kunene) kwintsapho ye-Srixon Z 355. Dunlop Sports Co. Ltd.
I-Z 355 fairways kunye ne-Z 355 hybridi zibandakanya indlela entsha ye-"Action Mass" yokusebenza, epheleleyo ne-Miyazaki Jinsoku. Zombini i-fairways kunye ne-hybridi zisebenzisa ubuso be-HT1770 yobunxi be-metal.
I-fairway woods ineeprofayili ezingenanto kwaye zenzelwe ukukhuthaza i- angle ephezulu yokuqalisa . I-wood-3 ine-cup design design kunye nesakhiwo sangaphakathi se-40-gram, injongo yayo, iSrixon ithi, kukunyusa i-clubface flex, i-spin ephantsi kunye nokukhuliswa.
Imithi ye-Srixon Z 355 engenanto ifika kwi-3-wood (15 degrees of loft), imithi engama-4 (17), i-5-inkuni (19) kunye ne-7-wood (22) yamadoda; Imithi emithathu (15), i-5-inkuni (19) kunye ne-7-kuni (22) yabasetyhini.
Izixhobo ze-Z 355 ziza ku-3H (19), 4H (23) kunye no-5H (26) ngamadoda; 4H (23) kunye ne-5H (26) yabasetyhini.
I-MAP yi-$ 229.99 yee-fairway woods, i-$ 199.99 yee-hybrid. Zomibini zifumaneka kwiivenkile ngomhla we-Septemba 18, 2015.
I-Srixon Z 355 iIrons
I-Srixon Z 355 irons. Dunlop Sports Co. Ltd.
I-355 irons, i-Srixon ithi, yaveliswa "ngenjongo yodwa yokuvumelana."
Iimvumi ziqhayisa nge "Action Mass" kwiimpawu eziphezulu ze-clubhead ezineengqimba eziphezulu. Kodwa kwimeko yeentsimbi, isethi inikezela okukhethiweyo kweempahla ezimbini: i-Miyazaki Jinsoku kulabo bafuna igraphite; I-Nippon NS Pro 950GH DST kulabo abakhetha i-shafts ensimbi.
Iinqwelomoya nazo zine-Srixon Tour Tour VT. Ulo hlobo olusandul 'u-V luye lwahlula ukuxhatshazwa kwe-turf kwaye, inkampani ithi, ikhokelela ekugqibeleni ukutshatyalaliswa kokutshatyalaliswa.
Iimitha ezine-4 ukuya kwe-7 zine-club engxowankulu yensimbi kwi-chassis yensimbi; Iimfono ezimfutshane zakhiwo zinye.
I-Srixon Z 355 irons ziza kwi-4-intsimbi nge-A-wedge (gap wedge). I-iron-5 i-degrees ezingama-24, i-iron-7 degrees kunye ne-9-iron 39 degrees. Iseti e-8 ine-MAP ye-$ 899.99 ngeesalathisi zegraphite okanye i-$ 799.99 ngeensimbi zensimbi. Iimvumi zithinjwa ngomhla we-Septemba 18, 2015.
Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa kulezi okanye ezinye iiklabhu zegolfu zaseSrixon, tyelela i-srixon.com.
I-Personal Help Climbing Gear
IYunivesithi yaseWisconsin-Eau Claire Admissions
1995 I-US Open: I-Pavin iza nge-Clutch
Indlela Yokufumana Icawa
Ukuthayipha iphepha lakho
Iingcaphulo zomculi: Ietalente kunye nokudala
Inkcazo yeMpembelelo wezeMpilo
Biography kaHernando Cortez
Umthandazo kuKumkani weNgcwelengcwele oyiRosari
13 iMagical Studio Ghibli Cosplays